အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကြင်ဖော်ရှာပြီး လူငယ်လေးတွေနဲ့ ချစ်ရည်လူးချင်နေတဲ့ (၈၃) နှစ်အရွယ် အဖွားအို……….
အသက် ၈၃ နှစ် အရွယ် အဘွားအို တစ်ယောက်ဟာ ကြင်ဖော် ချစ်သူ ရှာတဲ့ app တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tinder ပေါ်မှာ သူမနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် လူငယ်လေး တွေကို လိုက်ရှာနေတဲ့ အကြောင်းကို ဘာသာပြန်ရေးသားတင်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ် website ရဲ့ ဖော်ပြချက် အရ […]
ဗစ်တိုးရီးယားအမှုကို အစိုးရ အချက်သုံးချက်နဲ့ စောင့်ကြည့်နေ…………
နေပြည်တော်၊စက်တင်ဘာလ – ၁၄ ရက်။ဗစ်တိုးရီးယားအမှုကို အစိုးရအနေနဲ့ အချက်သုံးချက်ဖြင့် စောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတရုံးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ဆိုပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ က ပြုလုပ်တဲ့ သမ္မတရုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အခုလို ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇော်ဌေးက`နံပါတ်တစ်က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဓိကဖြစ်တယ်။နံပါတ်နှစ်က ကျွန်တော်တို့ အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့ သမ္မတရုံးက ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်။နံပါတ်သုံးကတော့ […]
ပိုင်​တံခွန်​​မွေး​နေ့ အတွက်​ ထိုင်းမှပရိသတ်​​တွေစုလှူ ကြတဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ မွေးနေ့အလှူအကြောင်း….
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်လ် ပိုင်တံခွန် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ ပိုင်တံခွန်က မော်ဒယ်လ် အလုပ်အပြင် သူပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေရှိတာကြောင့် သူ့ကို အားပေးချစ်ခင်တဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပိုင်တံခွန် ရဲ့မွေးနေ့အတွက် ထိုင်းပရိသတ်တွေ လှူဒါန်းတဲ့ မွေးနေ့အလှူ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို […]
မန်းလေးက လူတစ်ယောက် ရန်ကုန်မှာ အငယ်ထားတာ သိန်း ၅ ထောင်မြတ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်း
မြန်မာပြည်မှာ မယားငယ်ထားတာ ခေတ်စားသတဲ့ မန်းလေးက လူတစ်ယောက်က လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်က ရန်ကုန်မှာ အငယ်တစ်ယောက်ထားခဲ့တယ်။ အငယ်အတွက် သိန်းလေးထောင်တန် အိမ်တစ်လုံးဝယ်ပေးခဲ့ပြီး လစဉ်လတိုင်း ဆယ်သိန်းပေးသုံးခဲ့တယ်။ ဒီတစ်နှစ်မှာ အငယ်နဲ့ သူလမ်းခွဲလိုက်တယ်။ ဝယ်ထားတဲ့ အိမ်ကိုရောင်းတော့ သိန်းတစ်သောင်းရတယ်။ တွက်ကြည့်တော့ မယားငယ်ကို ၆ နှစ် အလကားတွဲလိုက်ရပြီး၊ […]
ShweFMရဲ့ တစ်​နှစ်​တာ သီချင်းအ​တောင်းခံရဆုံး အမျိုးသား​တေးသံရှင်​ဆုရှင် ဖြိုးမြတ်​​အောင်………………
Myanmar Idol Season3Winner ဆုရှင်ဖြိုးမြတ်အောင် ဟာဆိုရင် အနုပညာလောကထဲမှာ ကြိုးစားလျှောက်လှမ်းနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြိုးမြတ်အောင်က ကြော်ငြာများကိုလည်း လက်ခံရိုက်ကူးနေပြီး နယ်ပွဲများသီဆိုရင်း အနုပညာအလုပ်တွေ တောက်လျှောက် လုပ်ကိုင်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဖြိုးမြတ်အောင်က Shwe FM 2019 မှာတစ်​နှစ်​တာ […]
ဘာသာကူးပြောင်းလာပြီး ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမအောက်မှာ ဆယ်နှစ်ကြာပျော်မွေ့နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ၂ ဦးးးး………….
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဓိက ကိုးကွယ်ရာဘာသာကြီး ၄ ခုရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာတို့ ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ အခြားဘာသာတွေ နတ်ကိုးကွယ်သူတွေနဲ့ ဘာသာမဲ့သူတွေလည်း ရှိကြပါသေးတယ်။ ဘာသာတရားအားလုံးကတော့ သူ့ဘာသာနဲ့သူကောင်းကြပါတယ်။ ကောင်းတာလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။ မကောင်းတာ လုပ်တာတွေ မလုပ်မိဖို့ တားမြစ်မယ်။ ဒါဘာသာတရားတွေရဲ့ အခြေခံလို့ […]
August 3, 2019 Articles
สิ่งง่าย ๆ ที่คู่รักมีความสุขทำได้ทุกวัน
1. พูดคุยและฟังซึ่งกันและกันจริงๆ ฟังดูง่ายใช่มั้ย ฉันหมายถึงทำไมคุณถึงมีความสัมพันธ์หรือแต่งงานกับคนที่คุณไม่ต้องการคุยด้วย มันเป็นวิธีที่ธรรมดากว่าที่คุณคิด ลองดูรอบ ๆ วันนี้ คู่รักส่วนใหญ่มีใบหน้าในโทรศัพท์แล็ปท็อปวิดีโอเกมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ พวกเขามีความสัมพันธ์กับพวกเขามากกว่าคู่ชีวิตที่แท้จริงของพวกเขา ดังนั้นคุยกัน ฟังซึ่งกันและกัน – และฉันหมายถึงฟังกันและกันด้วยสมองและหัวใจของคุณ 2. ติดต่อกันตลอดทั้งวัน ฉันเดทกับผู้ชายสักครั้งเมื่อเราอยู่ด้วยกันทุกอย่างยอดเยี่ยม เราเข้ากันได้ทุกอย่างไหลลื่นและฉันคิดว่าเรามีบางสิ่งที่พิเศษจริงๆ แต่ปัญหาคือเมื่อเราแยกจากกันฉันแทบไม่เคยได้ยินจากเขาเลย แม้ว่าบางคนอาจชอบเสียงนี้ แต่ก็ไม่ได้สร้างหรือรักษาความสนิทสนมระหว่างคุณสองคน แม้ว่าจะเป็นข้อความด่วนในระหว่างวันที่ถามว่า “คุณกำลังทำอะไรอยู่” หรือ […]
1. รู้จักผู้ชมของคุณดี การเข้าใจผู้ชมของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน สิ่งนี้ใช้กับการสื่อสารด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร, การนำเสนอผลงาน, อีเมลรายวัน, การประกาศทั่วทั้ง บริษัท หรือการอัพเดทสถานะในโครงการ ไม่ว่าข้อความของคุณจะได้รับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพหรือได้รับอย่างดีเกิดจากการเข้าใจในสิ่งที่ผู้ชมของคุณสนใจ คุณกำหนดเป้าหมายด้วยการสื่อสารของคุณคือใคร เจตนาของข้อความของคุณคืออะไร? พวกเขาต้องรู้อะไรบ้าง คุณต้องการให้พวกเขาทำอะไร วิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารข้อความถึงผู้ชมของคุณคืออะไร ผู้ชมของคุณจะรับรู้หรือตีความข้อความได้อย่างไร ผู้ชมของคุณจะรู้สึกคิดและตอบสนองอย่างไรเมื่อพวกเขาได้รับข้อความของคุณ ในการตอบคำถามเหล่านี้คุณจะต้องวางแผนล่วงหน้าทำการวิจัยและสังเกตพฤติกรรมของผู้ชมของคุณ ตัวอย่างเช่นวิธีการสื่อสารกับทีมหรือเพื่อนของคุณอาจแตกต่างจากวิธีการสื่อสารกับผู้นำของคุณเพราะกลุ่มเหล่านี้มีความสนใจแตกต่างกัน 2. พยายามเข้าใจสถานการณ์และชี้แจงให้ชัดเจน ใช้เวลาในการคิดและตั้งใจ ก่อนสื่อสารในที่ทำงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหยุดเข้าใจสถานการณ์ชี้แจงและเอาใจใส่ นี่คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน: อยากรู้อยากเห็น […]
1. ถอดปลั๊กเพื่อเชื่อมต่อกับตัวเอง ในสังคมที่เรามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับเทคโนโลยีหลายรูปแบบมันง่ายที่จะตัดการเชื่อมต่อจากตัวคุณเอง เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับทุกคนในโลกเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการ มันกลายเป็นเครื่องมือที่เราสามารถรับความรู้ได้ไม่รู้จบในไม่กี่วินาที แต่น่าเสียดายที่มันทำให้เรากลายเป็นคนห่างเหินกันมากขึ้นและมีชีวิตโดยทั่วไป เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทำให้เรา “เสมือนจริง” ซึ่งหมายถึง “เกือบจะเหมือนหรือคล้ายกันมาก แต่ไม่เหมือนกันมาก  ด้วยวิธีนี้เทคโนโลยีได้หลบหนีจากความเป็นจริงของชีวิต คุณเคยทำดีท็อกซ์ดิจิตอลเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หรือแม้แต่หนึ่งเดือนหรือไม่? รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับมันไหม? การถอดปลั๊กไม่ใช่แค่การตัดการเชื่อมต่อจากโลกดิจิตอล แต่เป็นการกลับมาหาตัวคุณเองและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ ฉันขอแนะนำให้คุณฝึกฝนเป็นประจำทุกวันเพื่อปิดจิตใจและอารมณ์จากเทคโนโลยีทุกรูปแบบแม้ว่าจะใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงก็ตาม ลบสิ่งรบกวนและเชื่อมต่อกลับกับสภาพแวดล้อมของคุณและผู้อื่น ฉันสัญญาว่าจะช่วยให้คุณพบความเงียบสงบที่คุณต้องการเพื่อเข้าไปด้านในในแบบที่บำรุงจิตใจร่างกายและวิญญาณของคุณ 2. รับความเสี่ยง รับจริงด้วยตัวคุณเอง … คุณเล่นปลอดภัยเกินไปหรือเปล่า? […]
เหตุใดการให้อภัยตนเองจึงมีความสำคัญ ตาม Kendra Cherry, MS, ผู้เขียนและที่ปรึกษาด้านการศึกษากับงบตรวจสอบโดยสตีเวน Gans, MD, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาจิตเวชศาสตร์ที่ Harvard Medical School, การให้อภัยสามารถลดความเครียดซึ่งจะเพิ่มภูมิคุ้มกันลดปัญหาสุขภาพจิตเช่นภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล และเพิ่มสุขภาพร่างกายเนื่องจากการลดความโกรธและเพิ่มสุขภาพของหัวใจ  ดังนั้นเมื่อเราฝึกให้อภัยตนเองสุขภาพโดยรวมของเราจะเพิ่มขึ้น หากเราไม่พบกุญแจสู่การให้อภัยสำหรับตัวเราเองและคนอื่น ๆ เรายังคงกังวลและลงโทษตัวเองให้เป็นระเบียบ มีฤดูกาลต่าง ๆ ในชีวิตของเราที่เราสามารถใช้บทเรียนที่เจ็บปวดเพื่อผลดีและเรียนรู้จาก แต่เมื่อพูดถึงวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเราเองจนถึงตอนนั้นเราก็เจ็บปวด เราแค่ทำร้ายตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ […]